ngwaahịa - Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
MCCB (Kpụrụ Case Circuit emebi)
Kpụrụ Case Circuit emebi na-bu maka eduzi ugbu a na nkịtị mode na ịgbanyụ ya na obere sekit na sekit, bufee, inadmissible bucking nakwa dị ka arụmọrụ actuation na tripping nke electric circuit akụkụ. Ezubere ha maka ojiji na nkeji eletrik nwere voltage na-arụ ọrụ na-ejedebe na 400V kwa nke edepụtara ugbu a site na 12,5 ruo 1600A.
ELCB / CBR (Earth leakage Circuit emebi)
Earth leakage Circuit emebi usoro nke circuit emebi na-ọtụtụ-eji na-ewu, njem, ọwara, obibi, wdg The igbu oge ụdị usoro a nke circuit emebi na-eji maka alaka edoghi
Nkesa nke okporo ụzọ; A na-eji ụdị edozi edozi iji dozie ihe omume dị ugbu a ma ọ bụ oge nkwụsị na saịtị.
MCB (Obere Circuit emebi)
A na-ezube ndị na-agbaji okirikiri iji nye ike iyi ọkụ na-akpaghị aka n'okpuru oke iyi. A na-atụ aro ka ha jiri ya rụọ ọrụ na ngalaba otu (ụlọ na ala) na bọọdụ nkesa nke ụlọ obibi, ụlọ, ọha na ụlọ ọrụ nchịkwa.
RCBO (Ihe mgbochi ezumike nká a na-arụ ọrụ ugbu a na nchebe na-enweghị nchebe)
A na-ezube ndị na-agbaji elekere elekere ugbu a na-echedo maka nchedo ihe egwu eletrik ma ọ bụrụ na nrụnye nrụnye eletriki, maka igbochi ọkụ kpatara site na ntanetị nke ụwa ugbu a, bufee ya na nchedo mkpirikpi.
RCCB (Mmapụta Ugbu Circuit emebi)
E mepụtawo ma rụpụta RCCB ihe ngagharị ugbua dị ugbu a dịka iwu IEC61008-1 kachasị dị wee rube isi na ụkpụrụ EN50022 maka mgbanwe modular. Enwere ike iji ha iji kwanye okporo ụzọ ntụzịaka ndị nwere “okpu udi” ihe eji arụ ọrụ.
Motor echebe circuit emebi
Kwes Ada Ada busbar nkwonkwo igbe